Ukuphepha kuzinhlelo ze-GNU / Linux, kuncike ohlelweni noma kumlawuli? | Kusuka kuLinux
Ukuphepha kuzinhlelo ze-GNU / Linux, kuncike ohlelweni noma kumlawuli?
UCharlie-Brown | | I-GNU / Linux
Ezinsukwini ezidlule bebegijimisa inethi imibiko yokuhlaselwa Baxhaphaza ukuba sengozini ku-PHP, okuvumela amanye amasayithi asemthethweni ukuthi asebenzise amakhasi wewebhu anekhono nezikhangiso, aveze izivakashi ekufakweni kwe-malware kumakhompyutha abo. Lokhu kuhlasela kusizakala nge ukuba sengozini kwe-PHP okubucayi kakhulu ivezwe obala ezinyangeni ezingama-22 ezedlule nalapho kukhishelwe khona izibuyekezo ezihambisanayo.
Abanye sebeqalile ukugcizelela ukuthi ingxenye enhle yamaseva afakwe engozini kulokhu kuhlaselwa yizinhlobo ze-GNU / Linux, ezenza sengathi zingabaza ukuphepha kwalolu hlelo lokusebenza, kepha ngaphandle kokungena emininingwaneni ngohlobo lobungozi noma izizathu kungani sekwenzeke lokhu.
Amasistimu ane-GNU / Linux enegciwane, kuzo zonke izimo, basebenzisa i- Uhlobo lwe-Linux kernel 2.6, eyakhishwa ngo-2007 noma phambilini. Akukho lapho kukhulunywa khona ngokutheleleka kwezinhlelo ezisebenzisa izinhlamvu eziphakeme noma ezivuselelwe ngokufanele; kodwa-ke, kusenabaphathi abacabanga ukuthi "... uma ingaphukile, ayidingi ukulungiswa" bese kwenzeka lezi zinto.
Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo lwakamuva lwenkampani yonogada i-ESET, imininingwane yocingo "Ukusebenza Windigo", lapho ngokusebenzisa amakhithi amaningi wokuhlasela, kufaka phakathi eyodwa ebizwa I-Cdorked eyenzelwe ngokukhethekile i-Apache namanye amaseva we-web evulekile yomthombo ovulekile, kanye nenye ebizwa I-Ebury SSH, bekulokhu ngaphezu kwezinhlelo ezingama-26,000 ze-GNU / Linux ezonakaliswe kusukela ngoMeyi wonyaka odlule, ngabe lokhu kusho ukuthi i-GNU / Linux ayisaphephile?
Okokuqala, ukubeka izinto kumongo, uma siqhathanisa izinombolo zangaphambilini namakhompyutha acishe abe yizigidi ezi-2 zeWindows ezonakaliswe yi-bootnet IZeroAccess Ngaphambi kokuvalwa ngoDisemba 2013, kulula ukuphetha ngokuthi, mayelana nezokuphepha, Izinhlelo ze-GNU / Linux zisaphephe kakhulu kunalezo ezisebenzisa iMicrosoft Operating System, kepha ngabe kuyiphutha le-GNU / Linux ukuthi amasistimu angama-26,000 analawo OS anciphisiwe?
Njengasendabeni yokuba sengozini kwe-PHP ebucayi okukhulunywe ngayo ngenhla, okuthinta amasistimu angenakho ukuvuselelwa kwe-kernel, lokhu okunye ukuhlaselwa kufaka izinhlelo lapho igama lomsebenzisi elizenzakalelayo kanye / noma iphasiwedi ingazange iguqulwe futhi egcina amachweba 23 no-80 avuleka ngokungadingekile; Ngabe iphutha langempela le-GNU / Linux?
Ngokusobala, impendulo ithi CHA, inkinga akuyona i-OS esetshenziswayo kepha ukunganaki kanye nokunganakwa kwabaphathi balezo zinhlelo abangaqondi kahle ubukhulu obushiwo ngungoti wezokuphepha UBruce Schneier lokho kufanele kushiselwe ebuchosheni bethu: Ukuphepha AKUYENZO OKUNGEKHO umkhiqizo.
Akusizi ngalutho uma sifaka uhlelo oluphephile oluqinisekisiwe uma silushiya lushiyiwe futhi singafaki izibuyekezo ezihambisanayo ngokushesha nje lapho zikhishwa. Ngokufanayo, akusizi ngalutho ukugcina isistimu yethu ivuselelwa uma iziqinisekiso zokufakazela ubuqiniso ezivela ngokuzenzakalela ngesikhathi sokufakwa ziqhubeka nokusetshenziswa. Ezimweni zombili, kunjalo izinqubo zokuphepha eziyisisekelo, ezingaphindwa, zisetshenziswa kahle.
Uma unakekelwa nguwe uhlelo lwe-GNU / Linux nge-Apache noma enye iseva yomthombo ovulekile futhi ufuna ukubheka ukuthi ngabe yonakalisiwe yini, inqubo ilula. Uma kwenzeka kuba Ebury, kufanele uvule ukuphela bese uthayipha umyalo olandelayo:
Uma impendulo yehlukile ku:
bese uhlu lwezinketho ezifanele zalowo myalo, bese uhlelo lwakho luyekethiswa.
Endabeni ye I-Cdorked, inqubo iyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Kufanele uvule ukuphela bese ubhala:
Uma ngabe uhlelo lwakho luyekethiswa, lapho-ke I-Cdorked izothumela kabusha isicelo futhi ikunikeze umphumela olandelayo:
Ngaphandle kwalokho, ngeke ibuyise noma yini noma indawo ehlukile.
Indlela yokubulala amagciwane ingabonakala ingahluziwe, kepha iyona kuphela efakazelwe ukuthi iyasebenza: Sula uhlelo ngokugcwele, ukufaka kabusha kusuka ekuqaleni futhi setha kabusha bonke ubufakazi umsebenzisi kanye nomlawuli ovela esigungwini esingahlosiwe. Uma kubonakala kunzima kuwe, cabanga ukuthi, ukube ubushintshe iziqinisekiso ngokushesha, ngabe awuzange ululaze lolu hlelo.
Ukuhlaziywa okuningiliziwe kwezindlela lezi zifo ezisebenza ngazo, kanye nezindlela ezithile ezisetshenzisiwe ukuzisabalalisa kanye nezinyathelo ezihambelanayo okufanele zithathwe, siphakamisa ukulanda nokufunda ukuhlaziywa okuphelele kwe "Ukusebenza Windigo" itholakala kusixhumanisi esilandelayo:
Ekugcineni, a isiphetho esiyisisekelo: Alukho uhlelo lokusebenza oluqinisekiswe ngokumelene nabaphathi abangenankinga noma abanganaki; Ngokuphathelene nokuphepha, kuhlale kunokuthile okufanele kwenziwe, ngoba iphutha lokuqala nelibi kakhulu ukucabanga ukuthi sesikufezile, noma awucabangi kanjalo?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ukuphepha kuzinhlelo ze-GNU / Linux, kuncike ohlelweni noma kumlawuli?
Kuyiqiniso, abantu "bayenzeka", bese kwenzeka okwenzekayo. Ngikubona nsuku zonke ngodaba lwezibuyekezo, kungakhathalekile ukuthi uhlelo luni (i-Linux, i-Windows, i-Mac, i-Android ...) ukuthi abantu abenzi izibuyekezo, bayavilapha, abanasikhathi, angidlali uma kwenzeka kwenzeka ...
Futhi hhayi lokho kuphela, kepha basuka ekushintsheni iziqinisekiso ezizenzakalelayo noma baqhubeke nokusebenzisa amaphasiwedi afana ne- "1234" nokunye okunjalo bese bekhononda; futhi yebo, uqinisile, noma ngabe basebenzisa yiphi i-OS, amaphutha ayafana.
Ngiyabonga kakhulu ngokuma ubeke amazwana ...
Kuhle kakhulu! kuyiqiniso impela kukho konke!
Ngiyabonga ngokuphawula kwakho nangokuma ngo ...
Umyalo ophelele engiwuthole kunethiwekhi yomsebenzisi @Matt:
ssh -G 2> & 1 | grep -e ngokungemthetho-engaziwa> / dev / null && echo "System clean" || kunanela "Ukutheleleka kwesistimu"
Waoh! ... Kungcono kakhulu, umyalo usuvele ukutshela ngqo.
Siyabonga ngomnikelo nangokudlula kwakho.
Ngivumelana nawe ngokugcwele, ukuphepha kungukuthuthuka okuqhubekayo!
Ngiyabonga kakhulu ngamazwana nangokuma ...
Kuliqiniso impela, kungumsebenzi wezintuthwane lapho njalo kufanele ubheke futhi unakekele ukuphepha.
I-athikili enhle, izolo nje izolo umlingani wami ubengitshela ngomsebenzi weWindigo awufunde ezindabeni: "hhayi ukuthi iLinux ayinakuthola ezifweni", futhi wayesho ukuthi kuncike ezintweni eziningi, hhayi kuphela uma iLinux ikhona noma ingaqinisekile .
Ngizoncoma ukuthi ufunde le ndatshana, noma ngabe awuqondi noma yibuphi ubuchwepheshe XD
Ngeshwa lowo ngumbono oshiywe yilolo hlobo lwezindaba, ngombono wami omelelwe kabi ngamabomu, ngenhlanhla umlingani wakho okungenani uphawule kuwe, kepha manje lungiselela ukuqoqwa kwemibuzo ngemuva kokufundwa kwendatshana.
I-athikili enhle kakhulu, uCharlie. Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho.
Ngiyabonga ngokusinda nangamazwana akho ...
Ngiyabonga kakhulu uPablo, ukwanga ...
Ngiyabonga ngemininingwane oyishicilelayo, futhi ngokuvumelana ngokugcwele nenqubo echaziwe, ngendlela ireferensi enhle kakhulu ku-athikili kaSchneier ethi "Ukuphepha KUYINQUBO HHAYI umkhiqizo".
Ukubingelela okuvela eVenezuela. 😀
Ngiyabonga ngokuphawula nangokudlula kwakho.
Okokuqala, umnikelo omuhle kakhulu !! Ngikufundile futhi bekuthakazelisa ngempela, ngivumelana ngokuphelele nombono wakho wokuthi ezokuphepha ziyinqubo, hhayi umkhiqizo, kuya ngomlawuli weSystem, ukuthi kufanelekile ukuba nohlelo oluphephe kakhulu uma ulushiya lapho ngaphandle ukuyivuselela ngaphandle kokushintsha iziqinisekiso ezizenzakalelayo?
Ngithatha leli thuba ukukubuza umbuzo uma ungenankinga, ngiyethemba awunankinga nokuphendula.
Bheka, ngijabule kakhulu ngalesi sihloko sokuphepha futhi ngithanda ukufunda kabanzi mayelana nokuphepha ku-GNU / Linux, SSH nokuthi yini i-GNU / Linux iyonke, woza, uma kungeyona inkathazo, ungangincomela okuthile ukuqala? I-PDF, "inkomba," noma yini engaqondisa i-newbie ingasiza.
Ngiyabingelela futhi ngiyabonga kakhulu kusengaphambili!
I-Operation Windigo ... Kuze kube muva nje ngibonile lesi simo, sonke siyazi ukuthi ukuphepha ku-GNU / Linux kungaphezu kwawo wonke umthwalo womlawuli. Hhayi-ke, angikaqondi ukuthi uhlelo lwami luye lwaphazamiseka kanjani, okusho ukuthi, "Ukungenwa Yisistimu" uma ngingafakanga lutho kuhlelo olungasuki ngqo ekusekelweni, futhi empeleni uma ngabe kuyisonto engiyifakile i-Linux Mint, futhi kuphela engifake i-lm-sensors, Gparted kanye namathuluzi wemodi ye-laptop, ngakho-ke kubonakala kumangaza kimi ukuthi uhlelo seluthelelekile, manje sekufanele ngilususe ngokuphelele futhi ngilufake kabusha. Manje nginombuzo omkhulu wokuthi singaluvikela kanjani uhlelo ngoba seluthelelekile futhi angazi nokuthi haha… Ngiyabonga
Kuhlala kubalulekile ukuthi kube nezindlela zokuphepha ezinjengalezi ezichazwe endatshaneni nokunye uma kukhulunywa ngokunakekela umndeni, kepha uma ufuna ukubona zonke izinketho ezinikezwa yimakethe ngalokhu, ngiyakumema ukuthi uvakashele http://www.portaldeseguridad.es/
Uyenza kanjani i-CD drive ingakwazi ukuvala